Theaterlọ ihe nkiri ụlọ na-eme dvd maka ụgbọ ala Buick China Manufacturer
Nkọwa:Mmekọahụ Dvd,Ime Dvd,Thelọ ihe nkiri ụlọ Dvd
Home > Ngwaahịa > Buick Android Car Dvd > Theaterlọ ihe nkiri ụlọ na-eme dvd maka ụgbọ ala Buick
Ubu oke: 20000 pcs per month
Ebe Mmalite: Shenzhen China
1. Ihe atụ maka Buick kwụsiri ike ugbu a. Anyị na-anabata ọrụ OEM. Nwere ike iji atụmatụ nke gị maka akara, nkwakọ ngwaahịa na UI. Ike nrụpụta anyị maka DVD DVD ụgbọ ala Buick a bụ ihe dị ka iberibe 20000 kwa ọnwa, yabụ, enweghị nchegbu banyere ngwaahịa a. Anyị ga-anọ ebe a ma nọrọ na njikere inye aka.
2.Our Buick tinyere gam akporo na wince Car DVD Player, nwere ahụmịhe afọ 7 na imebe, n'ichepụta na ire ahịa Car DVD ọkpụkpọ, anyị emeela mmekọrịta azụmahịa na ọtụtụ ndị ahịa bara uru sitere na Japan, Russia, Ukraine, Turkey, Spain, Germany, Italy, Iran, Pakistan, Dubai, Israel, Korea, Saudi Arabia, India, Brazil, wdg. Buick ụgbọ ala DVD DVD ọkpụkpọ bụ ihe na-ewu ewu n'ụwa nile.
3. Ugbu a, anyị na-enye ihe karịrị 300 nlereanya android Car DVD player gụnyere ụdị niile maka Buick. Playergbọ ala anyị dvd niile nwere sọftụwia na usoro kachasị ọhụrụ, ọ kwụsiri ike ma dịkwa ngwa. Iji mee ka njigide dị mma, igwe DVD DVD ụgbọ ala Buick a nwere asambodo CE / FCC / RoHs / E-MARK. Mkpụrụ obi anyị mma!
4. Nkọwapụta Buick dị ka ndị a:
Ihuenyo HD: 1024 * 600
OS: Android 5.1.1 sistemụ
Isi ugboro ole: 1.6GHz
Ihu ihuenyo otutu mmetuaka
GPS + IPOD + BT + Redio + AUX IN + DVR
2 Way mirror njikọ
Civic 2012 Car DVD GPS Player N'ihi Honda Kpọtụrụ ugbu a
Nwa egwuregwu 6.0 maka Hyundai Solaris Verna Kpọtụrụ ugbu a
Abụọ Din 9 Inch gam akporo 6.0 Volkswagen Kpọtụrụ ugbu a
7.1.1 Android Car DVD Player N'ihi Honda CIVIC Kpọtụrụ ugbu a
Mmekọahụ Dvd Ime Dvd Thelọ ihe nkiri ụlọ Dvd PG Onye Mmekọ Dvd Dgbọala Dvd Egwuregwu Dvd Free Mmekọahụ Onye ọkpụkpọ Redio Dvd Ihe ọkpụkpọ Dvd maka WAX